Inkcazo Imilomo yemilomo yenziwe ikakhulu ngobhedu. Ezinye izinto zenziwe ngeplastiki kunye nezinto zenylon. Ngokubanzi isetyenziswa ngokudibeneyo nesixhobo somlilo ukudlala indima yokudityaniswa kwamanzi. Umbhobho unemisebenzi emibini: iJet kunye nokutshiza. Xa usebenzisa, jika nje umlomo wombhobho njengoko kufuneka. Iinkcukacha eziphambili: ● Izinto: I-Brass kunye ne-plactic ● Ubungakanani: 19mm / 25mm ● Uxinzelelo lokusebenza: 6-10bar ● Uxinzelelo lovavanyo: 12bar ● Umenzi kunye nokuqinisekiswa kwiBSI Processing Steps: Drawing-Mold -Hose drawing -Assem ...
Ijethi yokutshiza umlomo ngevalve yolawulo
INKCAZELO: Umjelo wokutshiza i-Jet ngevalve yolawulo luhlobo lwemilomo yemilomo. Le mibhobho ifumaneka ngealuminium okanye iPlastiki kwaye yenziwa ukuthobela i-BS 5041 Icandelo 1 eliqhelekileyo kunye nonxibelelwano lokuhambisa ithumbu ngokuhambelana ne-BS 336: 2010 esemgangathweni. Imilomo yemilomo ihlelwa phantsi koxinzelelo oluphantsi kwaye ikulungele ukusetyenziswa kuxinzelelo lwegama lokungena ukuya kuthi ga kwiibhari ezili-16. Ukugqitywa kwangaphakathi kugqitywe yonke umlomo ngomgangatho ophezulu wokuqinisekisa ukuthintelwa kokuhamba okuphantsi okuhlangabezana nokuhamba kwamanzi okumiselweyo ...
BS336 iadaptha enye
Inkcazo: Iadaptha enye yohlobo lweadaptha yencwadana. Ezi adapters zenziwe ngobhedu kunye nealuminium eyenziweyo ukuthobela i-BS 336: 2010 esemgangathweni. Iadaptha zihlelwa phantsi koxinzelelo oluphantsi kwaye zikulungele ukusetyenziswa kuxinzelelo lwegama lokungena ukuya kuthi ga kwiibhari ezili-16. Ukugqitywa kwangaphakathi kokugqitywa kwazo zonke iadaptha zikumgangatho ophezulu kuqinisekisa ukuthintelwa kokuhamba okuphantsi okuhlangabezana neemfuno zovavanyo lokuhamba kwamanzi oluqhelekileyo, ihlala isetyenziswa kunye nesicoci somlilo, esinokulandela ...
Ukudibanisa umbhobho weStorz
Inkcazo: I-Storz hose coupling isetyenziselwa ukulwa ulwandle kwinkonzo yokuhambisa amanzi ngaphakathi ngaphakathi enqanaweni. vula ivelufa kwaye ugqithisele amanzi kwimilomo esecaleni ukucima umlilo. Kwinkqubo yemveliso, silandela ngokungqongqo imigangatho yaselwandle yokuqhubekeka kunye ne-testin ...